Vdeo laryngoscopy waa nooc ka mid ah habka loo yaqaan 'laryngoscopy' aan tooska ahayn kaas oo dhakhtarku aanu si toos ah u baarin dhuunta. Taa baddalkeeda, dhuunta ayaa lagu sawiray laryngoscope fiberoptic ama dijitaal ah (kamarad leh isha iftiinka) oo la gelinayo marinka (sanka) ama si tartiib tartiib ah (afka).
Wadada mareenka laryngeal maaskaro ee lumen laba jeer la tuuro iyo silikoon lma ee suuxdinta
Marinka mareenka Laryngeal waa marin hawo mareenka supraglottic oo ay soo saartay Archie Brain, MD isla markaana lagu soo kordhiyay xarun caafimaad 1988. Dr. Marin-haweedka laba-lumen laryngeal mask waxaa loogu talagalay labada lumen ee nuugista iyo hawo-qaadashada.
Baaritaanka Heerkulka la tuuro iyo Sensor-ka SPO2 la tuuro
Baaritaanka Heerkulka La Tuuri Karo BOT-B / BOT-D / BOT-Q Hordhac Baaritaanka heerkulka jirka ee la tuuri karo wuxuu adeegsadaa astaamaha muuqaalka jirka ee adkeysiga heerkulka sare ee saxda ah ee baaritaanka dhamaadka isbadala isbeddelka heerkulka dibedda si uu jirka ugu xirmo. baaritaanka heerkulka ee kormeeraha oo leh habka kormeerka heerkulka jirka. Isbeddelka isbeddelka kuleylka ee heerkulka ayaa loo beddelaa calaamadda korantada iyo soosaarka kormeeraha si loo xisaabiyo jirka u dhigma ...
Marin haweedka loo yaqaan 'Laryngeal mask airway' waa aalad mareenka supraglottic marin-haweedka ah oo uu soo saaray Dr. Brain waxaana lagu soo kordhiyay xarun caafimaad sanadkii 1988. Dr. Marin haweedka maaskarada laryngeal wuxuu ka samaysan yahay alaab ceyriin ah oo silikoon heer-caafimaad ah, latex waa bilaash.